10 Toerana fitsangatsanganana ivelan'ny vanim-potoana manerana izao tontolo izao | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Toerana fitsangatsanganana ivelan'ny vanim-potoana manerana izao tontolo izao
Mahafantatra ireo mponina ao an-toerana tsy misy mpizahatany marobe mijery eo an-tsorokao ary manafika ilay cafe kely mahafatifaty, ireo toerana fitsangatsanganana ivelan'ny vanim-potoana eran'izao tontolo izao no tsara indrindra amin'ny fialan-tsasatra tsy hay hadinoina.
1. Toerana fitsangatsanganana ivelan'ny vanim-potoana: Irlandy tamin'ny Oktobra
Voaravaka volamena, rivotra madio, ny hatsaran-tarehy voajanahary Irlandy amin'ny Tendrombohitra Wicklow, fiara kely fotsiny avy any Dublin ary tonga amin'ny fitoerana masina mahafinaritra ianao. Eto, izay lalana fitsangantsanganana rehetra dia mitondra anao any amin'ny riandrano mahavariana, fomba fijery epic, ary lanitra manga na lohasaha Glendalough ary fonenana monasita tamin'ny taonjato faha-6.
Tombony fanampiny amin'ny fitsidihana ny fizaran-taona any Irlandy ny fotoana hankafizanao ny pintan'ny Guinness ao amin'ny trano fisotroana eo an-toerana, manoloana ny afo misokatra.
2. Italia Tamin'ny volana aprily
Mitsoraka any amin'ny Mediterane, maka truffles, ary ravina ravina mahafinaritra, Italia no toerana farany fitsangatsanganana amin'ny vanim-potoana amin'ny volana aprily. Ny lohataona no fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Italia toy ny mari-pana, hamandoana, vidin'ny, ary mihena ny vahoaka.
Te-hiala sasatra any amin'ny morontsirak'i Amalfi ny rehetra, na eo afovoan'ny voaloboka any Tuscany. Na izany aza, lafo sy be olona rehefa fahavaratra, ny vanim-potoana tampon'ny. Noho izany, amin'ny volana aprily dia ny fitsangatsanganana any Italie no fotoana mety indrindra handehanana.
Milan mankany Venise miaraka amina lamasinina
Florence ho any Venise miaraka amina lamasinina
Bologna mankany Venise miaraka amina lamasinina
Treviso mankany Venise miaraka amina lamasinina
3. Toerana fitsangatsanganana ivelan'ny vanim-potoana: Loire Valley France Amin'ny tapaky ny volana septambra
Mamony ny dahlia fararano, rivotra madio any an-tendrombohitra, ravina fararano, ary rivotra malefaka amin'ny andro mafana, ho hitanao fa nofinofy tanteraka ny lohasahan'i Loire amin'ny vanim-potoana. Ny divay frantsay mahafinaritra dia fantatry ny divay fotsy, ary ny fotoana hijinjana dia manomboka amin'ny tapaky ny volana septambra.
Noho izany, ny fotoana mety indrindra handehanana any Loire dia amin'ny volana septambra, faran'ny vanim-potoana avo. Ho tonga any amin'ny festival Chateau de Chaumont Garden ianao, ny fetin'ny voatabia ao amin'ny Chateau de la Bourdaisiere, ary Festivini miaraka amin'ny fety lehibe ao amin'ny Abontey Fontevraud. Maka holatra any anaty zohy mangatsiaka, na mitsangatsangana rehefa milatsaka ny mari-pana, fa ny andro dia mbola lava ary mazava ny andro – Loire Valley dia tanjona mahavariana amin'ny vanim-potoana amin'ny volana septambra.
Dijon mankany Provence miaraka amina lamasinina
Paris hiasa Provence miaraka amin'ny lamasinina
Lyon mankany Provence miaraka amin'ny lamasinina
Marseilles hiasa amin'ny lamasinina
4. Toerana fitsangatsanganana an-kalamanjana tsara indrindra any Alemana: Munich Tamin'ny volana septambra-oktobra
Na eo aza ny anarana mamitaka, manomboka amin'ny septambra ny fetin'ny labiera mahafinaritra. Oktoberfest dia antony iray mahagaga handehanana any Alemana, sy ny tanàna niaviany, Munich. Nandritra izany fotoana izany, ho hitanao ao anaty korontana ny tanàna ary mahafinaritra be i Munich.
Na dia midika aza izany fa mety ho voahodidin'ny mpizahatany ianao, na dia tsy vanim-potoana ambony aza. Mbola mendrika ny mandeha any Munich any amin'ny vanim-potoana amin'ny volana septambra, tsotra fotsiny amin'ny fanandramana ny majika an'ny Oktoberfest.
5. Toerana fitsangatsanganana ivelan'ny vanim-potoana any Shina: Shanghai Tamin'ny Novambra
Miaraka amin'ny mponina ao 26 olona an-tapitrisany, ho hitanao ao anaty vahoaka maro any Shanghai foana ianao. Na izany aza, ny fitsangatsanganana an-tsena mankany Shanghai dia midika fa nody avy any aminy ireo mpizahatany fialantsasatra fahavaratra, ka hifangaro amin'ny mponina ianao.
Ary, ny toetr'andro any Shanghai dia mirongatra ho rakotra hafanana sy hamandoana, noho izany antony bebe kokoa amin'ny fitsangatsanganana amin'ny vanim-potoana sy mankafy ny skyline an'i Shanghai amin'ny volana Novambra. Oktobra-Novambra no vanim-potoana any Shanghai rehefa misy hamandoana, zavatra ilaina, ary midina ny vahoaka. Amin'ity fomba ity dia handray soa betsaka kokoa ianao avy amin'ilay tanàna mahafinaritra sy manaitra.
6. Toerana fitsangatsanganana ivelan'ny vanim-potoana manerana izao tontolo izao: Espana Andalusia Tamin'ny volana septambra
Miaraka amin'ny fiesta sy fety saika isan'andro, ny faritra Andalusia tsara tarehy sy manaitra dia nofinofy amin'ny volana septambra. Manomboka amin'ny fetin'ny fiotazana divay ka hatrany amin'ny hazan-dranomasina sy tanna amoron-dranomasina - ny faran'ny volana septambra no fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Andalusia.
Raha ny volana Aogositra ka hatramin'ny voalohan'ny volana septambra dia mbola mafana ihany, amin'ny faran'ny volana septambra dia mety ho sendra orana ianao, na ny masoandro mody tsara tarehy-amoron-dranomasina, saingy tsy afaka miaina na mandehandeha eran'ny tanàna tsara tarehy Andalusia ianao. andro mafana mifoka. Ary noho izany, Andalusia no tanjona lavorary any Spanyol amin'ny faran'ny volana septambra.
7. Algarve Portugal amin'ny tapaky ny volana septambra
Mahagaga i Algarve mandritra ny taona, ka tsy misy fotoana ratsy hitsidihana. Ho an'ny milomano sy miala sasatra amin'ny morontsiraka mahafinaritra any Portugal, ary angataho ny morontsiraka Atlantika ary atokisanao irery, tapaky ny volana septambra no fotoana mety hitsidihana an'i Algarve.
Raha ny fahavaratra no mafana indrindra, io koa no be olona indrindra, ary amin'ny ririnina, hihaona amin'ny surfers be dia be ianao manodidina ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra ho an'ny surf eto amin'izao tontolo izao. Ary noho izany, Algarve dia toerana fialantsasatra tsara indrindra amin'ny tapaky ny volana septambra. Hahazo fotoana tsy fahita firy ianao hankafizanao ireo lava-bolongana mahatalanjona, hantsam-bato, ary tanàna fanjonoana manamorona ny morontsiraka.
8. Fitsangatsanganana ivelan'ny vanim-potoana mankany Viena amin'ny volana septambra
Sakafo Viennese an-dalambe, divay, gin, na ny cocktail safidinao dia antony mahagaga ny fitsangatsanganana any Wina amin'ny volana septambra. Raha efa ho lany ny fahavaratra, ary miaraka aminy ny mpizahatany marobe, fa miverina an-tanàna ny Viennese ary toy izany koa ireo fety lehibe.
Ary noho izany, Wina dia iray amin'ireo tampony 10 Toerana fitsangatsanganana ivelan'ny vanim-potoana any Eropa. Azonao atao ny misafidy amin'ny fitsidihana mitsangatsangana any amin'ny tanimboaloboka ka hatramin'ny fankalazana amin'ny iray amin'ireo tsena maro ary fetibe any Wina amin'ny volana septambra fotsiny ary ho an'ny eo an-toerana ihany. Tsy misy fomba tsara kokoa hankafizana ny sakafo Austrianianina, kolontsaina, ary ny hatsaran-tarehin'i Wina noho ny miharo amin'ireo olona eo an-toerana.
9. Nanketo Alpes eto Soisa
Talohan'ny niovan'ny toerana tamin'ny loko fararano sy ny tampon'akanjo mitafy akanjo fotsy misy lanezy, ny Nanketo Alpes eto Soisa dia vanim-potoana majika. Rehefa tafaverina an-tanindrazana ny ankamaroan'ny mpizahatany, namerina tamin'ny laoniny ny majika am-pilaminana ny Alpes Soisa, manome toerana ho an'ny hetsika ivelan'ny trano sy ny piknika.
Ary noho izany, ny Swiss Alpes dia toerana fitsangatsanganana an-tany hafa amin'ny volana septambra. Mafana ny andro, lanitra mangarahara ary afaka mankafy fitsangatsangana ianao, bisikileta, miala sasatra ary mijery ireo fomba fijery mahafinaritra. Noho izany, afaka mihazakazaka iray akory aza ianao ireo tendrombohitra tsara tarehy indrindra eto Eropa Jungfrau.
10. Toerana fitsangatsanganana ivelan'ny vanim-potoana manerana izao tontolo izao: Paris Tamin'ny Desambra
Mandehandeha manaraka ny Champs-Alyeese, na amin'ny alàlan'ny Tuileries Garden mankany Louvre tsy misy mpizahatany marobe dia traikefa miavaka any Paris. Ny vanim-potoana any Paris dia mbola tia kokoa rehefa afaka mandehandeha mamaky ny tanàna mpizahatany indrindra eto an-tany ianao, tsy misy mpizahatany isaky ny zoro. Raha ny fahavaratra dia manolotra ny toetrandro sy ny andro mafana indrindra, Ny volana desambra dia azo antoka fa tsara indrindra amin'ny fialantsasatra any Paris.
Ny fitsangatsanganana any Paris amin'ny vanim-potoana any Paris amin'ny volana Desambra dia fampanantenan'ny fahitana mahatalanjona. Ankoatry ny, mety hanana fipoahana amin'ny maro ianao Markety Krismasy.
eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao amin'ny drafitra ny dia tsy andehananao any amin'ireo toerana nofinofy eran'izao tontolo izao.
Te-hapetraka ao amin'ny tranonkalanao ve ny lahatsoratray bilaogy “10 Toerana fitsangantsanganana tsy an-tany eran-tany”? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Foff-season-travel-locations%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, ary azonao atao ny manova ny / ru ho / fr na / es ary fiteny maro hafa.
Eoropa Best Noely Markets By Train